‘सबैका बाबा हुन्छ हाम्रो किन बाबा छैन ममी ? भनेर दुई छोरीले प्रश्न गर्दा म र्न मनलाग्छ’ (भिडियो हेर्नुस्) | भिडियो
April 17, 2021 NepstokLeaveaComment on ‘सबैका बाबा हुन्छ हाम्रो किन बाबा छैन ममी ? भनेर दुई छोरीले प्रश्न गर्दा म र्न मनलाग्छ’ (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । कान्छी छोरी ७ महिनाकी हुँदा विदेश गएका श्रीमान अहिले छोरी ८ वर्षको हुँदा सम्म पनि फर्केर आएनन् । दुई छोरी लिएर माइतको सहारामा बस्नु पर्दा उनलाई निकै दुख लाग्छ । त्यो भन्दा पनि दुख सबैका बाबा हुन्छ हाम्रो किन बाबा छैन ममी भनेर छोरीहरुले भन्दा । उनले धेरै पटक आफुलाई संसारवाट विदा गर्ने विचार पनि गरिन् तर आफ्ना दुई छोरीको अनुहार हेरेर त्यसो गर्न पनि सकिनन् । सुनसरीको धरानकी सम्झना राई यतिबेला छोरीहरुका लािग भविष्यका लागि चिन्तित छन् । ठुलो छोरी नै ११ वर्षको भइसकिन् । एउछा छोरी ४ र अर्की छोरी एकमा पढ्छिन् ।
उनी चाहन्छिन् यदि श्रीमान आफुसंग खुसी छैनन् भने जो संग रहन चाहन्छन् उतै बसुन तर छोरीहरुको भविष्यका लागि भने साझेदारी गरुन् । उनीहरुलाई वुवा छंदा नै बुवा विहिन हुन नपरोस् । आफुले कसरी श्रीमानको खोजी गर्ने भन्ने थाहा नपाएका कारण उनले ७ वर्ष सम्म कतै खोज्न गइनन् । विवाह लगत्तै पनि उनका श्रीमानले त्यती वास्ता गर्थेनन् । विवाह पछि पनि उनी माइतमै बस्थिन् । नेपालमा छँदा विग्रिए, विदेश गएपछि जिम्मेवार बन्छन् होला भनेर उनले ऋण खोजेर श्रीमानलाई विदेश पठाइन् । तर उनी फर्केर आएनन् ।
विदेश जाँदा लागेको ऋण पनि तिर्नु भएन, सुध्रनु हुन्छ होला भनेर पठाएको फर्केर आउनुभएन, उनले रुँदै भनिन्, विदेश गए पछि ९ महिना सम्म हाम्रो कुरा हुन्थ्यो तर त्यसपछि सम्पर्क विहिन भएको उनको भनाई छ । श्रीमानको घर धनकुटाको पात्लेखोला हो, घर परिवारका सदस्यले पनि छोरा हाम्रो सम्पर्कमा छैनन् भन्ने गरेको उनको भनाई छ । श्रीमानलाई उनले मलेसिया पठाएकी थिइन्, उतै हराएपछि मलेसियामा रहेका अन्य नेपालीहरु मार्फत खोजी गर्दा पनि फेला पार्न नसकेको उनको भनाई छ ।
धनकुटा सासु ससुराको घरमै बस्दा पनि छोरीहरु विरामी हुँदा पनि वास्ता नगर्ने, घरमै नबस्ने गर्ने गरेकाले आफु माइत आएर बस्न थालेको बताउँछिन् । उनीहरुले बाबा छन् भन्ने महशुष गर्न पाउन भनेर अहिले उनले श्रीमानलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेकी छन् ।
एक वर्ष सम्म लिभ इन टुगेदरमा बसे, ४ महिनाको ग र्भ भएपछि थाहा भयो श्रीमानको यस्तो रहस्य (भिडियो हेर्नुस्)
मलेसियमामा भएका श्रीमानले नेपालमा रहेकि आफ्नै श्रीमतिले गो,प्य अंग र न’ग्न फोटो पठा भन्न थाले त्यसपछि…..भिडियो सहित
छोरीको जन्म दिएर प्राण त्याग गरिन नायिका निता ढुंगानाले हेर्नुस दर्दनाक (भीडीयो)
पा,पिनी आमा ! जसले आफुले जन्माएको डेढ महिने शिशुलाई घाँ,टी थि,चेर मा,रिन (हेर्नुस्
April 8, 2021 Nepstok
प्रत्येक्षदर्शीले खोले घटना हुनुको रहस्य, टिकटक बनाउन कर्णालीबाट तीन जनाले हा म फा ल्दा (भिडियो)